Qaramada midoobay oo ku baaqday in wax laga qabto dhibaatooyin... | Universal Somali TV
Qaramada midoobay oo ku baaqday in wax laga qabto dhibaatooyinka heesta Qaxootiga Dunida
Magaalada Geneva ee caasimada wadanka Switzerland ayaa Isniinta maanta ah waxaa ka furmaya shirka 70-aad kaasi oo looga hadlayo Arimaha qaxootiga Aduunka, iyadoo looga hadli doono dhibaatooyin ka heesta dadka dagaalada Saameeyeen.
Shirka ayaa waxaa ka qeyb galaya wafdi kala duwan oo ka socda wadamada Dunida waxaana diirada lagu saari doonaa hormarinta nolosha dadka qaxootiga ee ku dayacan dalalka ay saameeyeen Colaada.
Dhanka kale madaxa hey,ada qaxootiga Aduunka ee Mr Filippo Grandi, ayaa ka digay kororka dadka qaxootiga maalinba maalinta ka danbeysa waxaana uu ugu baaqay wadamada Dunida in ay u istaagaan waxkaqabashada Dhibaatadan.
Mr Grandi ayaa tilmaamay in dhalinyaro badan oo ku dhashay wadamada dagaalada ka jira ay heysato mustaqbal la,aan Baahsan.
Soomaaliya oo ka mid ah wadamada waxyeelada ay ka soo gaartay colaada ayaa qeyb ka ah kulanka waxaana u matalaya wasiirka arimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta Cabdi Maxamed Sabriye iyo saraakiil Kale.
Sanadihii la soo dhaafay ayaa waxaa sare u sii kacayay dhibaatada heysata dadka qaxootiga iyadoo wadamo badan oo ku yaal dalalka carbeed iyo qaarada Afrika dadka ku nool ay noqdeen barakacayaal taasi oo loo sababeynayo amni darro iyo dhaqaale la,aan ka jirta Wadamadooda.
Kan-xigaMareykanka oo bilaabay in ciidankiisa...
Kan-horeBoqolaal neef oo daad ku qaaday roob ...
55,228,721 unique visits